Hampandry tany sa hampody mandry ? • AoRaha
Miaramila fito amby roapolo lahy no indray naiditra eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy. Fito amby roapolo be izao! Ekena fa tsy misy marina natao tsy hipoitra saingy aleo foana misoroka toy izay mitsabo. Aina telo indray no nafoy tamin’ny hetraketrak’ireo
miaramila. Somary manaitra fotsiny ny fahenoana ny fahasahian’ireo mpitandro filaminana sasany izay mihevitra ho manjaka any
an-tanin’ny jamba sy ny marenina.
Toa arakaraka ny fanamafisana an’ity hoe fanadiovana hatao amin’ny fianakaviam-ben’ireo Miaramila sy Polisy ary Zandary no vao mainka mampirongatra ny hadalan’ny sasany. Na izay tokoa angaha ilay zatra ny lalan-drininina, na takaitran’ny gaboraraka nihafian’ny vahoaka hatramin’izay. Betsaka ireo mitonona ho tompon’ny hery ka minia manosihosy ny zon’ny olon-tsotra, indrindra any amin’ny faritra lavitra andriana any. Zary mampitombo ny vesatra efa tsy zaka amin’ny afitsok’ireo mpanao ratsy sy ny fahapotehan’ny fiaraha-monina ny fihoaram-pefy mitranga toy iny famonoana ankitsirano, tsy misy fanadihadiana tsy misy Fitsarana, nihatra tamin’ireo telo lahy izay hita faty nifatotra tongotra aman-tanana, tany Ampitatafika Antanifotsy iny. Miady isika amin’ny fitsaram-bahoaka nefa ireo nantenain-kanirina aza ity no mampivandravandra. Asa loatra ny endriky ny fampanajana ny fitsipi-pifehezana ara-miaramila eto amintsika eto fa tahaka ireo natao hiambina indray no andaniana andro amin’ny
fiambenana. Ahiana vao mainka hampihorohoro ny sarambabebam-bahoaka ny fahenoana ny fahatongavan’ireo miaramila mpampandry tany. Tsy ela akory no nisian’ireo miaramila voalaza fa nandratra reny sy zaza, mandroba fananan’olona, manao herisetra ara-nofo…
Mila paikady hafa mihitsy ny fisorohana ny tranga mamohehitra toy izany satria andrin’ny andavanandro iray manontolon’ny vahoaka ireo mpitandro filaminana fa tsy ho biby fampitahorana akory.
Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany
Fitoriana mpanao gazety
Tetikasan’ny filoham-pirenena Nankatoavin’ny HCC ny fananganana ilay fikambanana mpanao asa soa